Xaakim heer federaal ah oo Mareykan ayaa dalbatay in 24 sarkaal oo Sacuudi ah ay su’aalo weydiiso… – Hagaag.com
Xaakim heer federaal ah oo Mareykan ayaa dalbatay in 24 sarkaal oo Sacuudi ah ay su’aalo weydiiso…
Posted on 11 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Xaakim heer federaal ah oo ku sugan magaalada New York ayaa soo saartay amar dowlada Sacuudiga looga dalbaday in garsoorka Mareykanka uu galaangal u yeesho inay su’aalo weydiiyaan 24 sarkaal oo ka mid ah kuwo hadda iyo kuwo horeba ogaanshahooda suurta galka ah ee ku aadan weeraradii September 11, 2001 ee ka dhacay magaalooyinka New York iyo Washington.
Sida laga soo xigtay maqaal uu qoray wariye Michael Isikoff ee website-ka Yahoo News, waxaa ka mid ah saraakiisha Sucuudiga ee la dalbaday, Amiir Bandar bin Sultan Abdulaziz, safiirkii hore ee Washington, iyo madaxa shaqaalahiisa, Ahmed Al-Qattan.
Liiska ayaa waxaa sidoo kale ku jira Musaad Axmed Al-Jarrah oo ahaa sarkaal hore oo ka tirsanaa safaaradda Sacuudiga, Fahad Al-Thumairi oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha Islaamka iyo Omar Al-Bayoumi oo FBI-da Mareykanka ay ku tuhmayaan inuu la shaqeynayay sirdoonka Sacuudiga.
Xaakim Sarah Netburn ayaa waxay sheegtay in dukumiintiyada maxkamadu heshay oo badankood aan la shaacin – waxay muujiyeen in Prince Bandar uu aqoon toos ah u lahaa doorka boqortooyadu ay u xilsaartay Thumairi iyo daboolka diblomaasiyadeed ee la siiyay.
Qoysaska dadkii ku waxyeeloobay weeraradaasi ayaa soo dhoweeyay go’aanka maxkamadda, oo la soo saaray maalinta uu dhacay weerarkaasi sanadguuradiisa 19aad, waxayna u arkeen go’aankii ugu muhiimsanaa ee la qaatay tan iyo weeraradaasi.
Waxaa xusid mudan in subaxnimadii September 11, 2001 ay ka yaabsatay Mareykanka iyo adduunka intiisa kale markii si toos ah shaashadaha telefiishanada laga daawaday labo diyaaradood oo rayid ah oo la afduubay ay dhex galayaan derbiyada xarunta ganacsiga adduunka ee New York oo dhulka la simay daarta iyo wixii ku dhex jirayba, halka diyaarad kale ay ku dhacday mid ka mid ah derbiyada wasaarada difaaca ee Pentagon ee magaalada Washington.
Waxaa ka dhasahay weeraradaasi inay ku dhintaan ku dhowaad 3 kun oo qof oo jinsiyado iyo qowmiyado badan lahaa, markii dambe waxaa sheegatay kooxda Al-Qaacida mas’uuliyada weerarkaasi.
Markaasi kadib waxaa dhacay dhacdooyin taxane ah oo siyaasadeed iyo mid military oo bedalay dhabaha taarikhda dadka oo dhan, arrintaasi waxaa ka dhashay wareegyo dagaalo iyo falal dhiig badan ku daatay oo ay wax ku noqdeen malaayiin dad ah oo dhimasho, dhaawac, xabsi iyo barakac ku qabsaday.